वायु प्रदूषणका कारण आँखाका बिरामी बढ्दै, कस्ता व्यक्ति धेरै प्रभावित ? - Kantipur Sandesh
वायु प्रदूषणका कारण आँखाका बिरामी बढ्दै, कस्ता व्यक्ति धेरै प्रभावित ?
7th April 2021, 4:25 PM
कञ्चनपु। वायु प्रदूषणका कारण कञ्चनपुरका बासिन्दामा आँखा पोल्ने, चिलाउने लगायतका समस्या देखा पर्न थालेको छ ।
स्वास्थ्यचौकी र अस्पतालमा अधिकांश बिरामी आँखाकै समस्या लिएर पुग्न थालेका छन् । झलारीस्थित स्वास्थ्यचौकीका अहेव लोकेन्द्र ऐरका अनुसार चार दिनदेखि दैनिक ३० देखि ५० बिरामी आँखाको समस्या लिएर उपचारका लागि पुग्न थालेका छन् ।
उपचारका लागि पुग्नेहरुले आँखा चिलाउने र पोल्नेलगायतका समस्या लिएर आउने गरेको उनले बताए । “वायु प्रदूषण बढेपछि यस्तो समस्या देखिँदै आएको छ”, उनले भने, “विशेषगरी बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक यस्तो समस्या लिएर बढी पुग्न थालेका छन् ।” वायु प्रदूषणको स्तर अत्यधिक मात्रामा बढेपछि बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या भएका व्यक्ति, मुटुरोगीलगायत अन्य दीर्घरोगी बढी प्रभावित हुन थालेका छन् ।
वायु प्रदूषणबाट प्रभावित हुनसक्ने व्यक्तिलाई घर बाहिर नजान आग्रह गरिएको भीमदत्त नगरपालिकाका वातावरण शाखाका प्रमुख गणेश ठगुन्नाले बताए । वायु प्रदूषण बढेपछि सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर यसबारे आग्रह गरिएको उनले बताए ।-रासस
अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन सभापति देउवाको माग
बैशाख २७, २०७८, ५:२० PM
संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका नाम सार्वजनिक
बैशाख २७, २०७८, १:११ PM
माधव नेपाल पक्षधर तीन नेतासँग विष्णु पौडेल छलफलमा
बैशाख २७, २०७८, १२:५६ PM
वीरगन्जमा थप ४ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
बैशाख २७, २०७८, १२:२५ PM
एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा भयो स्थगित
बैशाख २७, २०७८, ११:३९ AM
रिक्त संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका सिफारिस
बैशाख २६, २०७८, १:५९ PM
‘संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत माग्ने अधिकार छैन’
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर कोभिड–१९ डेडिकेटेड अस्पतालका रुपमा सञ्चालन
20 hours पहिले